U bhaudhi Vagadziri | China U bhaudhi Vatengi, Fekitori
U-yakaumbwa hoop. Bhaudhi inowanzo shandiswa mukuisa pombi kugadzirisa pombi. Bhaudhi iri rakaumbwa kunge U-chimiro. Inoshandiswa kubatanidza maviri firmware. Iko kune 4.8 uye 6.8 mamakisi, ayo akarapwa nekupisa galvanizing kuti uwane anti-corrosion maitiro.
Yakakwira simba U-bhaudhi
Yakakwira simba U-bhaudhi, inozivikanwawo senge yakasimba simba U-kadhi. Bhaudhi inowanzo shandiswa mukuisa pombi kugadzirisa pombi. Bhaudhi iri rakaumbwa kunge U-chimiro. Inoshandiswa kubatanidza maviri firmware. Kune 4.8, 8.8, 10.9 uye 12.9 mamakisi. Kazhinji kutaura, simba rakakwira riri pamusoro 8.8 giredhi, iro rinozivikanwa nesimba rakaomarara uye rakasimba kudhonza Ruvara dema, inotsvedzerera pamusoro.
U-bhaudhi, inozivikanwawo seu-kadhi. Bhaudhi inowanzo shandiswa mukuisa pombi kugadzirisa pombi. Bhaudhi iri rakaumbwa kunge U-chimiro. Inoshandiswa kubatanidza maviri firmware. Kune 4.8 giredhi, 8.8 giredhi, 10.9 giredhi uye 12.9 giredhi. Iyo inopisa-yakanyorovera U-bhaudhi ndeye U-bhaudhi mushure mekupisa-dhizaini kwakakurudzira pamusoro pekurapa, nekudaro kuwana anti-ngura mhedzisiro.